डा. टेड्रोस अधानोम गेब्रेयसस « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
Tag: डा. टेड्रोस अधानोम गेब्रेयसस
डब्ल्यूएचओका महानिर्देशक र स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाबीच भेटवार्ता
काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)का महानिर्देशक डा. टेड्रोस अधानोम गेब्रेयससले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडासँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ । मन्त्री खतिवडाको निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणका लागि बिहीबार काठमाडौं आइपुग्नु
डब्ल्युएचओका महानिर्देशक आज नेपाल आउदै
काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ) का महानिर्देशक डा. टेड्रोस अधानोम गेब्रेयसस आज (बिहिबार) नेपाल आउदै छन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाको औपचारिक निमन्त्रणामा डब्ल्युएचओका महानिर्देशक गेब्रेयसस बिहिबार मध्ह्यान
डब्ल्युएचओका महानिर्देशक भोलि नेपाल आउने
काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ) का महानिर्देशक डा. टेड्रोस अधानोम गेब्रेयसस बिहिबार नेपाल आउने भएका छन। सद्भावपूर्ण भ्रमणका लागि महानिर्देशक गेब्रेयसस नेपाल भ्रमणमा आउने भएका हुन् । महानिर्देशक गेब्रेयससले